Waxaan ahay dhibbane ama ka badbaade addoonsiga casriga ah - Settled
Haddii aadan heli karin baasaboorkaaga ama kaarkaaga aqoonsiga, ayna sabab u noqon qarto inuu qof kale uu haysto, uusanna ku siin doonin. Waxaa laga yaabaa inaad aad uga baqdo inaad weydiiso, ama xitaa aadan ogayn halka uu yaalo ama cidda haysata.
Waxaa laga yaabaa inaad ku nooshahay hoy lagula qaybsado oo uu ku siiyay qofka aad u shaqayso, laakiin aadan haysan kiro ama heshiis caddeyn kara meeshaad ku nooshahay iyo inta aad degganayd halkaas.
Waxaa laga yaabaa in waddankan lagu keenay ayadoo laguu ballan qaadey shaqo, laakiin baasaboorkaaga lagaa qaatey, laguguna qasbay inaad ku shaqaysid saacado dheer lacag yar ama lacag la’aan, laakiin ma joojin kartid ama kama tagi kartid shaqadaada kaarkaaga Aqoonsiga ama baasaaboorkaaga la’aantood.
Xaaladdahaas oo dhan waxay u badan tahay inaad tahay dhibbane addoonsiga casriga, waa inaadna raadsataa caawimaad ka hor intaadan codsan Xaaladda Deggan. Urur kaa caawin kara inaad ka baxdo xaaladda aad ku sugan tahay waa Mid aan la Arkin,(Unseen ) waana kan khadkooda caawinta:
08000 121700 Khadka Caawinta Addoonsiga Casriga ah (Modern Slavery Helpline)
Hope for Justice (Rajada Cadaaladda) xataa waxay bixisaa taageero iyo wacyigalin ku saabsan astaamaha tahriibinta dadka iyo halka laga soo sheegayo walaac. Waxa kale oo aad kala xiriiri kartaa Rajada Caddaaladda halkan
0300 008 8000 (sicirka maxalliga ah) ama email info.uk@hopeforjustice.org.
Haddaad qatar deg-dega ku jirtid, wac 999
Haddaad awooday inaad ka baxdo xaaladahaagaas, aadna hadda nabad qabtid, waxaa dhici karta inaad weli hayasatid dhibaatooyin kaa xannibaya inaad caddeysid qofkaad tahay iyo deggennaanshahaaga lagaaga rabo codsigaaga EUSS. Xaalad kasta waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad la xiriirto kuwo la shaqeeya hay’addeena samafalka socdaalka ee sharciga ah: Here for Good (Halkaan Wanaagsan).